Usomabhizinisi ubasela isikweletu - Ilanga News
Home Izindaba Usomabhizinisi ubasela isikweletu
Usomabhizinisi ubasela isikweletu
Uthi uTshatha usemvalile ukumfonela
INTATHELI YELANGA LANGESONTO
SIMUNCU isimo phakathi kukaTshathugodo Ngobe nosomabhizinisi, uCalvin Mathibeli, ofuna ngodli ijazi lephoyisa, imali
athi wayiboleka lo msakazi woKhozi FM.
USOMABHIZINISI wase-Thekwini ukhala ngokukweletwa yisilomo somsakazi woKhozi FM, uKhathide “Tshathugodo” Ngobe, isizumbulu semali athi wayesiboleke yona ngo-2017.
UCalvin Mathibeli, onamabhizinisi ahlukene, utshele ILANGA LangeSonto izolo ukuthi waboleka uTshatha imali engango-R150 000. Uthi ngonyaka odlule uTshatha wakhokha u-R80 000, akabange esayikhokha enye kuze kube manje.
Izolo ngoMgqibelo kuthe uTshatha ezifakele isithombe sakhe ku-Instagram, esihambisana nombhalo othi, “Igcokama laKwaNongoma, uMakhathakhatha! #Ispheshethwa #Isbatshazwa #WhatAwow #Sgiyangengoma @ukhozi_fm”, wangena uCalvin waphawula, ebuza ukuthi uTshatha uyikhokha nini imali yakhe njengoba eseziba izingcingo zakhe.
Ngemuva kwesikhashana nje lowo mbhalo kaCalvin ususiwe.
Ekhuluma naleli phephandaba, uCalvin ukhale ngokuthi uTshatha akasamtholi ocingweni futhi usemvalile nokuba amfonele (blocked).
Uthi ngemuva kokuba ebuze ku-Instagram ukuthi uyikhokha nini imali yakhe, nakhona uphinde wamvala.
“UTshatha wafika kimina ehluphekile, waboleka imali enga-ngo-R150 000 ngo-2017. Ngonyaka odlule ukhokhe u-R80 000, ngemuva kwalokho akaphindanga wabamba izingcingo zami,” esho.
Uthi phambilini uTshatha ubelokhu ekhala ngokuthi lo msebenzi ababeyowenza awukakhokhi.
U-Calvin ukhombise ILANGA LangeSonto imiyalezo athi wayexhumana kuyo noTshatha mayelana nendaba yemali.
Uthi ngeke ayeke ukufuna imali yakhe kuze kuba uyayithola.
Kukhona ne-voice note okuthiwa yathunyelwa nguTshatha ecela umhlangano noCalvin. Owesilisa, ozwakala kule voice note, uzibiza ngoTshatha kanti uthi bathole umsebenzi ka-
R2 million wokulungisa kabusha ijele.
Ukhala ngokuthi manje lo msebenzi udinga amandla okuba kuqalwe, manje ubafice kabi izinto zimapeketwane.
ILANGA LangeSonto lizamile ukuxhumana no-Tshatha izolo kodwa wangatholakala ko-makhalekhukhwini. Uthunyelelwe iWhatsApp message, okubonakele ukuthi ihambile, waphinde wathunyelelwa neSMS kodwa kwashaya isikhathi sokushicilela engakatholakali.
Previous articleBAYAVEVA NGOWAMABHAYISEKILI
Next articleUmphakathi ushise isikole eHluhluwe